Hotanterahana eto Toamasina ny 14 ka hatramin’ny 20 oktobra 2019 ny Lalao nasionaly amin’ny fanatanjahantena an-tsekoly. Eo amin'ny 2 000 mahery ireo mpandray anjara, izay avy amin’ny sekoly miisa 130 manerana ny Faritra 22, andrasana eto an-drenivohitry ny Faritra Atsinanana amin’izany. Atletisma, baolina kitra, « basket-ball », « hand-ball » sy « volley-ball » ary « cross country », ireo no taranja hifaninanana mandritra izany. Miara-mikarakara azy ity ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-tekinika sy arak’asa, sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Tanjona ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena an-tsekoly sy fanomezan-danja ny kolontsaina isam-paritra. Natao ihany koa hitiliana sy hitarafana sahady ireo mpilalao mendrika sy tokony hotrandrahana ho lasa mpilalao nasionaly.
Sary Odon Marius Randrianiaina
Nalain’i Nicolas Dupuis hanatevina ny FC Fleury 91, izay izy no mpanazatra azy, Rakotoharimalala Njiva Tsilavina Martin na i Njiva araka ny ahafantaran’ny maro azy. Tamin’ny fiandohan’ny volana jolay 2019 no vita ny fifanarahana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany. Ny alakamisy 3 oktobra 2019 i Njiva no niala teto Madagasikara namonjy io klioba hilalaovany io, rehefa tomombana avokoa ny antotan-taratasy hipetrahany any Frantsa. Amin'ny sabotsy 5 oktobra 2019 i Njiva no haseo amin'ny fomba ofisialy amin'ireo mpitia ny FC Fleury 91 ao amin’ny kianja Robert-Bobin, Bondoufle any Essonne. Mpilalao tao amin’ny Cnaps Sport i Njiva ary isan’ireo 23 lahy niaro ny voninahi-pirenena tamin’ny CAN 2019 tany Ejipta. 27 taona izy izao, mpanafika amin’ny elatra havia ny toerany ao amin’ny ny FC Fleury 91, klioba mifaninana amin'ny "National 2" any Frantsa.
Anatin’ny fampivondronana eny amin'ny CTN Carion ireo mpilalao mandrafitra ny Barea CHAN. Hisy lalao ara-piralahina roa hitsapana ny mpilalao sy hanamafisana ny fahaiza-miaraka mialoha ny ho fiatrehana ny lalao miverina izay hifanandrinan’i Madagasikara amin'i Namibia ny 19 oktobra 2019. Hatao eo amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ireo lalao ara-piralahina, hifandonan’ny Barea CHAN amin’ny Zanakala ny alahady 06 oktobra, avy eo ny ekipa voafantina Analamanga ny sabotsy 12 oktobra 2019.
Niondrika tamin'ny isa 1 noho 3 ny Fosa Junior (Madagasikara) nanoloana ny Tout Puissant Mazembe (RDC), androany alahady 29 septambra 2019, nandritra ny lalao miverina amin'ny fiadiana ny Amboaran'ny Kaofederasiona Afrikanina amin'ny baolina kitra. (Jereo Sary Tohiny)
Niondrika an’isa 1 noho 3 teo an-jaridainany ny Cnaps Sport nanoloana ny TS Galaxy avy atsy Afrika Atsimo, nandritra ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaofederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF) natao io tolakandro io teny Vontovorona. Efa nitarika 1 noho 0 ny TS Galaxy tamin’ny fizaram-potoana voalohany. Tany amin’ny segaondra farany tamin’ny fotoana fanampiny 3 minitra hifaran’ny lalao no nahatafiditra ny baolina tokana ny Cnaps Sport. Efa resy tamin’ny isa 0 noho 1 ny Cnaps tamin’ny lalao mandroso. (Jereo Sary )
Niondrika an’isa 1 noho 3 teo an-jaridainany ny Cnaps Sport nanoloana ny TS Galaxy avy atsy Afrika Atsimo, nandritra ny lalao miverina amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaofederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra (CAF) natao io tolakandro io teny Vontovorona. Efa nitarika 1 noho 0 ny TS Galaxy tamin’ny fizaram-potoana voalohany. Tany amin’ny segaondra farany tamin’ny fotoana fanampiny 3 minitra hifaran’ny lalao no nahatafiditra ny baolina tokana ny Cnaps Sport. Efa resy tamin’ny isa 0 noho 1 ny Cnaps tamin’ny lalao mandroso. (Jereo Sary Tohiny)
Hiatrika ny lalao miverina amin’ny Tout Puissant Mazembe ny Fosa Junior ny tolakandron’ny alahady 29 septambra 2019 izao, lalao atao ao amin’ny Kianja Frédéric Kibassa Maliba any Repoblika Demokratikan’i Congo. Lalao miverina ifandonan’ny ekipa roa tonta io, tafiditra amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ireo ekipa tompondaka. Nirava ady sahala samy tsy nitoko ny ekipa roa tonta nandritra ny lalao natao teo amin’ny Kianja Rabemananjara – Mahajanga tamin’ny 15 septambra 2019.
Nanolotra vola mitentina 3 000 000 Ar sy fanamiana « survêtement » ho an’ny Barea CHAN ireo mpitia kitra Malagasy tany ivelany sy teto an-toerana. Natolotra ny sabotsy hariva teo, teny amin’ny hotely nipetrahan’ny ekipa nasionaly nialoha ny fihaonana tamin’i Namibia ireto tolotra ireto, ho fanohanana azy ireo amin’izao dingana fahatelo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny tapakila handehanana any Cameroun amin’ny CHAN 2020. Andiany faharoa ity fanampiana ity, ka ireo mpilalao izay tsy mbola nahazo tamin'ilay fizarana teo aloha, satria izao izy ireo vao mandrafitra ny Barea no niantefany. (Jereo Sary Tohiny)